Xildhibaan Faarax Maxamed Dalmar oo sheegay in uu ka badbaadey isku day dil. – Kismaayo24 News Agency
by admin 16th January 2020 0152
Xildhibaan Faarax Maxamed Dalmar oo ka mid ah golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa shaaca ka qaaday in uu ka badbaaday weerar ay ku soo qaadeen koox hubaysan xili uu sheegay in gaari uu kaga degay gurigiisa hortiisa.
Waxa uu sheegay in rasaas lagu soo furay hase’ahaatee uu ka badbaaday weerarkaas oo uu sheegay in uusan aqonin cidda sida rasmiga ah uga dambeysa,ilamarkaana uu haatan nabad qabo.
Xildhibaanka ayaa shalay magaalada Garoowe kula hadlay Warbaahinta isaga oo kasoo horjeetay xilka qaadis lagu sameeyay guddoomiyaha Bangiga dhexe ee Puntland,iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in arrintaan ay xiriir la yeelan karto hadalkiisii shalay.
Dhinaca kalana guddoomiyihii hore ee gobolka Nugaan Cumar Cabdulaahi farawayne ayaa sheegay in markiiba ay goobta tageen haseyeeshee ay ku arkeen goobta raadka kooxihii weerarka soo qaaday iyo fooqa rasaastii ay ku rideen xildhibaanka.
admin 17th December 2015 2nd March 2016
Xildhibaan ka badbaadey isku day dil, kadib markii…………..